iOS 8.4, hanavao sa tsy hanavao? | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Applelised | | Apple Music, iOS, About us
Araka ny fantatsika vetivety, azo inoana fa amin'ny 30 Jona ho avy izao dia hivoaka izy io iOS 8.4 ary anjaran'ny tsirairay ny manapa-kevitra raha hanavao na tsia ity kinova vaovaon'ny rafitra fiasa Apple ity na tsia.
Tokony hanavao ny iOS 8.4 ve aho?
Raha tadidintsika ny tsaho rehetra niseho tato anatin'ny volana vitsivitsy, iOS 8.4 tokony ho avy tsy ho ela. Mark Gurman de 9to5Mac nilaza ny fanavaozana tokony hivoaka herinandro vitsivitsy aorian'ny famoahana ny iOS 9. Ny kinova vaovao an'ny rafitra dia naseho tamin'ny 8 Jona, satria andro vitsivitsy izany iOS 8.4 manaova fisehoana ofisialy amin'ny fitaovantsika Apple.
Fa tsy maintsy dinihinao ihany koa ny daty fiaingan'ny Apple Music dia kasaina hatao ny 30 Jona. Ity serivisy streaming mozika vaovao ity dia hanomboka amin'ny iOS 8.4. Ary rehefa mametraka ny kinova vaovao isika dia hahita sary masina vaovao hahafahantsika miditra amin'ny atiny rehetra misy. Alohan'ny hanombohana ny fanavaozana dia te hahalala antsipiriany misimisy momba ny rafitra ianao. Izany no antony anasanay anao hamaky ny lahatsoratra nataon'i Fernando Prada mpiara-miasa aminay izay milaza aminay ny vaovao rehetra iOS 8.4
Apple Music tsy io ihany no ho fanampiny tsara, iOS 8.4 dia hanisy fiovana sasany fanatsarana sy fanatsarana ihany koa iTunesRadio. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia afaka misafidy ireo tobin-tseranana arakaraka ny tarika na mpihira isika, ary koa ireo fidirana fidiana voafidy amin'ny alàlan'ny asa vaovao fantatra amin'ny hoe "Vao nilalao". Mazava ho azy fa ny fanamboarana bibikely sy ny fanovana hafa dia antenaina ihany koa ho fantatsika rehefa tonga ny fotoana.
Raha te-hanavao ianao dia azo antoka fa tonga ny fotoana hieritreretanao manadio ny fitaovanao. Toy ny fanavaozana rehetra dia ilaina ny mamela ny iPhone na iPad vonona, indrindra raha 16 GB fotsiny ianao. Azonao atao ny manangona ny rakitrao sy ny angonao ao iCloud, amin'ny kapila mafy ivelany na serivisy fampiantranoana rakitra rahona. Izaho manokana dia manoro hevitra anao aho mba hametraka nomaniny ho solon'izay rehetra notahirizinao tamin'ny fitaovanao. Tsotra be ny manao azy, mila manokatra fotsiny ianao iTunes ary ny fizotran'ny backup dia hanomboka aorian'ny fampifandraisana ilay fitaovana amin'ny solosaina. Raha tsy izany dia ataovy amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny safidy "Manaova kopia izao".
Talohan'ny iOS 8.4 fivoahana, mamporisika anao koa aho hijery ny fampiasa farany apetraka amin'ireo rindranasa napetrakao. Ny sasany amin'ireo fitarainana lehibe indrindra avy amin'ny mpampiasa an'i iPhone o iPad tonga taorian'ny fanavaozana avy iOS. Matetika dia noho ny (amin'ny tranga sasany) ny tsy fananana ny kinova farany indrindra amin'ny fampiharana azy ireo. Noho io antony io dia manolo-kevitra hatrany izahay ny hanaovana fanavaozana tsindraindray.
Mazava ho azy, raha vao ambara iOS 8.4 ary mandehana misintona, zahao fa manana haavon'ny bateria avo lenta mihoatra ny 50% ny fitaovanao. Ny zavatra mahazatra dia ny fanatanterahana ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny Ota, izany hoe, mivantana avy amin'ilay fitaovana mihitsy. Fa raha aleonao manao azy amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny tariby dia tsy hampifandraisinao amin'ny Mac na PC anao fotsiny izany ary hanatanterahana ny fizotrany amin'ny alàlan'ny iTunes.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » iOS 8.4, hanavao sa tsy hanavao?